Global Voices teny Malagasy » Bilaogy ao Però, taona 2005 · Global Voices teny Malagasy » Print
Bilaogy ao Però, taona 2005
Voadika ny 30 Jolay 2018 2:36 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Ity tatitra manaraka tamin'ny faran'ny taona ity dia nosoratan'i J.Francisco Canaza of Lima voalohany tamin'ny teny Espaniola  tao amin'ny bilaoginy, Apuntes Peruanos. Dikan-teny avy amin'i by Patrick Hall .
Nisy tolotra vaovao roa nifantoka tamin'ny bilaogy Peroviana tamin'ny taon-dasa: ny voalohany dia ny Perublog.net, izay nanomboka niasa tamin'ny volana Janoary 2005, ary manome fampiantranoana sy armoara fampandrenesana XMLRPC ankehitriny. Ary tamin'ny volana May, nipoitra ihany koa ny Perublogs.com, armoara iray izay ho lasa mpamatsy tolotra isan-karazany ho an'ny tontolon'ny bilaogy Peroviana ary koa mamoaka ny Blog Report, izay mandrefy sy manadihady ny asan'ireo bilaogera ao Però.
Na izany aza, ny zava-bita manan-danja indrindra tamin'ity taona ity dia ny fampidirana ireo mpandray anjara vaovao sy ireo lohahevitra vaovao ao amin'ny bilaogin'i Però. Natao tamin'ny bilaogin'ny literatiora ny fanampin'izany lehibe indrindra. Nandritra ny fotoana ela, toa ny an'i Ivan Thais ihany no ezaka tsara hitantsika natao tao amin'ny Notas Moleskine  (Naoty Moleskine), saingy nampivoaka an'i Gustavo Faverón , Daniel Salas , ary Leonardo Aguirre  ankoatra ny hafa ho hita kosa ny tamin'ny taona 2005.
Nipoitra ihany koa ny blaogy miresaka fanabeazana, toy ny asa nataon'i Juan Lapeyre tao amin'ny Educación y Tecnología  (Fanabeazana sy Teknolojia), ny an'ilay mpampianatra eny amin'ny oniversite Eland Vera , na ny an'i Elanor ao amin'ny La Casa del Arbol  (Ny trano avy amin'ny Hazo). Araka ny efa nolazaiko, dia manampy ny resadresaka vaovao sy ny fomba fifandraisana vaovao ao amin'ny tontolon'ny blaogy ny fisian'ireo mpanoratra vaovao ireo, ankoatra ny fisarihana mpihaino marobe mikasika ny aterineto sy ny azo atao amin'izany.
Ary azo antoka fa naneho mazava ny taona lasa fa liana amin'ny bilaogy ny media. Lahatsoratra sy blurbs samihafa no niseho tamin'ny gazetim-pirenena maromaro, manoritsoritra ny lafiny ankapoben'ny bilaogy sy ny lohahevitra resahany, ary koa lahatsoratra fampahafantarana ny tolotra ao amin'ny Perublogs . Ary dia nifarana tamin'ny fifanarahana fanohanana mahaliana ny taona izay ahitana rohy mankany amin'ny bilaogin'i Gustavo Faverón  ao amin'ny tranonkalan'izy ireo ny gazety Perú.21 .
Saingy tsy ny fampahalalam-baovao ihany no nampiseho fahalianana amin'ny blaogy. Na dia marina aza fa nanomboka tamin'ny fahatongavan'i JC Luján  “Sin Papel” (“Tsy mila taratasy) tamin'ny taona 2003 ny firongatry ny mpanao gazety ao amin'ny bilaogy, vondrona mpianatra tao amin'ny taranja nampianarany tao amin'ny oniversite ao an-toerana tamin'ny taona 2005 no niditra tamin'ny tontolon'ny blaogy, avy amin'ny ambaratongam-pahombiazana samihafa. Any amin'ny toerana hafa, mpanao gazety fanta-daza sy miavaka toa an'i Juan Gargurevich  sy Manuel Jesus Orbegozo  no nanamafy ny bilaogy natombok'izy ireo tamin'ny taona 2004, namadika azy ireo ho loharanom-baovao sy adihevitra. Niditra tao amin'ny “El Utero de Marita ” (Tranon-jazan'i Marita) ihany koa i Marco Sifuentes, ary i Daniel Colline, mpamakafaka, izay azo antoka fa mpanao gazety zatra indrindra amin'ny resaka ara-teknolojia – tsaroako izy niverina taona maro lasa izay, raha mbola nisy ny lisitra Navegante.
Koa dia nahitana lohahevitra vaovao, mpandray anjara vaovao ny taona 2005, ary manomboka maka endrika eo amin'ny tontolon'ny blaogy ny fahalianana vaovao. Na dia nahita tolotra maromaro aza isika izay toa niverindroa tamin'izany fotoana izany (tranga misy: Perublogs, Perublog, ary Blogsperu), dia nipoitra ihany koa ny vondrona tahaka ny Viadescape  sy Cinencuentro , izay nahita ny akanin'izy ireo manokana ary nanomboka nitrandraka ny mety ho fitomboana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy. Amin'ny taona 2006, mety hahita ny ezaka vaovao ataon'ny vondrona isika izay manome safidy maro kokoa ho an'ny mpiserasera (“cybernauts”). Mety mahaliana, ohatra, ny mahita ny fisongan'ny Viadescape sy mampiray vondrona ireo mpiserasera avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao, na bilaogy vaovao manana fifantohana ara-paritra hanomboka hampiseho vaovao momba ny fizahan-tany sy lohahevitra ao an-toerana. Mendrika jerena manokana ny fandraketam-peo – nanomboka heno tamin'ny feon'ireo olon-tsotra isan'andro izy ireo, mampiseho antsika fa ny fifandraisana dia tsy tombontsoa manokana na zavatra voafetra ho an'ny olona vitsivitsy ihany. Rehefa manana izany ao an-tsaina, toa tahaka ny taona mahafinaritra ny taona 2006. Tena matotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/30/123738/
 nosoratan'i J.Francisco Canaza of Lima voalohany tamin'ny teny Espaniola: http://franc.apuntesperuanos.com/archivos/2006/01/peru-en-los-blogs-2005/
 Patrick Hall: http://blogamundo.net/dev
 Notas Moleskine: http://notasmoleskine.blogspot.com/
 Gustavo Faverón: http://puenteareo1.blogspot.com/
 Daniel Salas: http://qaphqa.blogspot.com/
 Leonardo Aguirre: http://www.leonardoaguirre.com/blog/
 Educación y Tecnología: http://edutec.perublogs.com/
 Eland Vera: http://autocosmofilia.blogspot.com/
 La Casa del Arbol: http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol/
 JC Luján: http://juancarloslujan.blogspot.com/
 Juan Gargurevich: http://tiojuan.blogia.com/
 Manuel Jesus Orbegozo: http://mjoh.blogspot.com/
 El Utero de Marita: http://ocram.perublogs.com/